Previous Article Victor Osimhen Nọ N'isi Ụgbọ Dịka Ugo Naijiria Kụziere Aguiyi Lesotho Egwu Boolu
Next Article Ntozu AFCON: Ugo Naijiria Eburu Uze Benin
N'ụbọchị Naijiria chọrọ nanị otu goolu iji were gosi Amaglugglug nkarị, were nweta ohere n'agba anọ ikpeazụ, n'agbanyeghị mpụtara asọmpi nke ọzọ dị n'etiti Ivory Coast na Zambia, Ugo Olympic dara akwụkwọ elelere ha dịka ha enweghị ike were ohere niile ha nwetara n'asọmpi ahụ nye otu goolu ahụ na-ese okwu.
Mpụtara asọmpi ahụ gosiri na ha ji akara anọ were bụrụ ndị nke atọ n'otu B, na-eso Ivory Coast bụ ndị ji akara isii na Saụt Afrịka nwere akara ise, nke mere ha ji pụọ n'iso zọọ ohere maka ịsonye na egwuregwu Olympic ụmụ nwoke n'afọ na-abịa na Tokyo.
Dịka o mere n'afọ 2011, Ugo Naijiria erubeghị afọ iri abụọ na atọ bụ ndị pụrụ n'asọmpi a n'agba nke mbụ, dịka emerichara ha n'asọmpi nke mbụ.
Nke a sonyere ọdịda ndị otu egwu bọọlụ ụmụ nwaanyị Naijiria dara dịka ha enweghị ike ị nweta akwụkwọ Olympic nke ha na nke otu egwu bọọlụ ụmụ nwoke na-erughị afọ iri na asaa na Brazil dịka ha pụrụ na agba nke iri na isii n'aka mba Netherlands.
Dịka ọ na-ekwu okwu maka ọdịda ahụ, Onyeisi Otu Egwu Bọọlụ Naijiria, Amaju Pinnick, kwuru n'ọdịda nke Ugo Olympic bịara ka ihe ịtụnanya. "Site na nrụkọ ọrụ Ngalaba Gọọmenti Etiti na-ahụ maka Egwuregwu, anyị nyere otu egwu bọọlụ ahụ ihe niile ha chọrọ iji mee nke ọma. Erughị agba nke na-eso nke ikpeazụ ma tozukwa ịsonye na Olympics bụ ihe akpataoyi," dịka ọ dị n'okwu ya.
"Anyị ga-echeta n'afọ atọ gara aga, egwuregwu bọọlụ nwetara nanị ihe olu Olympics Naijiria jiri were lata na Brazil. Echiche anyị bụ na otu egwu bọọlụ a ga-etozu maka Tokyo, gaa ebe ahụ ma tunye anyị ugo."